Xaddi guud ee qaanuunka
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Xaddi guud ee qaanuunka
Laakiin waa nidaam in cadadka guud ee xeerarka in sidoo kale waxaa la ciyaaray wargeysyada iyo news halka ka hor, ilaa hadda, waayo, dadka kuwaas oo aan haysan laayeen oo deyn, noqon lahaa dad badan in dhulka ma oga waxa aad nidaaminaya.
Markan, waayo, wadarta guud ee qaanuunka, waxaan soo bandhigi doonaa taariikhda noqday fursad si loo ogaado waxyaabaha ay.
Waa maxay wadarta gacanta lacagta?
Tirada guud ee xeerka, marka uu u saxiixay amaahda, isagoo caydh ah waa sharciga qeexaya in kaliya ilaa saddex-meelood meel ka mid ah dakhliga sanadlaha ah ma amaahan kartaa lacag.
The Gaar ahaan, ka dib markii fulinta ee the case of shaqaalaha mushahar dakhliga sanadlaha ah 3.6 million, ma awoodi doonaan in ay amaahdaan oo kaliya ilaa 1.2 milyan oo yen.
Tani waa, xataa haddii wax la mid ah sidii aan u saxiixay ilaa in ka badan hal shirkad, ma awoodi doonaan in ay daynta dheeraad ah sameeyaan ka badan 120 million.
Intaa waxaa dheer, marka aad codsanaysid amaahda cusub ee maaliyadda macaamiisha, waa wadarta guud ee xeerka iyo isku mar ayaa sidoo kale soo gudbinta of shahaadada dakhliga lagu daro baaritaanka caadiga ah waxaa loo baahan yahay.
Kuwanu waa in lagu daro maaliyadda macaamiisha, sidoo kale in shirkadda shirkadda credit ama credit card ah, waxaan dhihi lahaa in ay si lama filaan ah waa sharci yaqaan, maxaa yeelay, waxanu waa in lagu dabaqo. background
total xeerka lacagta uu ku dhashay
guud ee xeerka lacagta uu ku dhashay, waxa ay la xidhiidhaan qofka in si ay u qabtaan a self-kacday ayaa kor u kacay. Waxaa ka mid ah qiyaasta dulsaarka, loo yaqaan cirro zone
fulinta ka hor, wuxuu ahaa awoodaan inay sameeyaan by maaliyadda macaamiisha reer Maxlii, haddii ay jiraan waa xaddi gaar ah oo dakhliga, tirada mid kasta oo amaahda.
Sidaas darteed, waxa sheegay in qofka xumaaday maalgelinta jawaab u dhicii ee Janjeeri waxaa sii kordhaya tirada kiisaska la isticmaalayo maaliyadda macaamilka.
Si kastaba ha ahaatee, qorshaha bixinta qofka amaahdo Mamanarazu, natiijo lahaa deynta iyo aad u badan si ay si degdeg ah baraf ah, haa way tahay sidoo kale garoomo dhowr ah in nolosha noqdo Mamanaranaku.
ka this arrimuhu, by isagoo caydh ah si ay u qabtaan a self-kacday ayaa kor u kacay, qaar badan oo ka mid ah maaliyadda macaamilka iyo maamulka Machikin waxa uu noqday la adkeeyay.
natiijo, Machikin sida ayaa rujin ee gobolka, waxa aanu u leeyihiin ugu yaraan halkaas oo dib u soo kabashada soo martay musallif Mamanarazu.
In si kale loo dhigo, xataa xirfad farshaxanka sidoo kale deymin dadka amaahatay, waannu ku jiraan xaalad sharciga ayaa noqday halkii Yuka si fiican u taalaa.
Sidaa darteed, in xukuumaddu ay hadda bixinta mid ka mid ah line ee foomka of total gacanta ku cadadka.
kooxda user ah, laakiin laga yaabaa in aad dareento in qayb ka xanibayo in aan la samayn karaa waa amaahashada kaliya ilaa xaddi gaar ah oo lacag, dhinaca kale waa gudaheedana sinaba uma ay wax xun dowladda waa inoo in ay joojiyaan ka hor dhicidda cadaabta deynta galay Xiang.
marka laga reebo tirada guud ee xeerka lacagta
Sidaas, wadarta guud ee xeerka waa sharciga ah waa aasaasiga ah ee maal-shaqsi ka mid ah hal qof heli karo waa xaddidan.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa sidoo kale waa kiis halkaas oo xeerka tani waa marka laga reebo.
ka badan kuwa caadiga ah, sida amaahda iyo deymaha auto, halka shopping oo aad u ballaaran, laakiin kuwa la xiriir dhow la leeyahay nolosha.
sidoo kale, kuwa lagu aqoonsan yahay marka laga reebo ah in lacag wadarteedu tahay xeerka, sidoo kale waxaa ka mid ah daynta lacagta ganacsiga.
ma deymin sida kharashka ku nool, waxaa loogu tala galay in ay qaataan qaab amaahda in milkiilayaasha ganacsiga lacag ganacsi. Si aad u
is ansixiyey, sababtoo ah waxa ay muhiimad ahaan u baahan yahay soo gudbinta of shahaadada dakhliga, waqtiga codsiga waa waa in aad u darabnay canshuur celinta iyo shahaado bixinta canshuurta.
Intaa waxaa dheer, amaahashada mabda, bangiyada iyo ururada deynta ma hoos wadarta guud ee xeerka.
la maaliyadda macaamiisha marka la barbar dhigo, inkastoo tirada baaritaanka maalmood waxa ay qaadataa khasaaro sida uu yahay, waxaan dhihi lahaa in ay jiraan sidoo kale waa in ay isku dayaan in ay doortaan marka aad rabto in aad amaahato lacag gaar ah.
dabcan, aan sharciyeysneyn Tani macnaheedu ma aha lacag aan xad lahayn lagu amaahdo.
gaar ahaan, waa in ay dhacdo dadka dhamaaday ilaa deyn ilaa xad, sababtoo ah baaritaanka noqdo daran, waxaa jira xaalado badan oo aan ka amaahan kartaa natiijo. xiriira /
danta guud ee waqtiga lacag href="http://xn--t8ja5qbdc8bd3083eea5016pfa.com/cooltaiwan/index.html"> ka bangiga
amaahatay la xiriira / kireysato "http://xn--t8ja5qbdc8bd3083eea5016pfa.com/cooltaiwan/calculator_01.html"> lacag ah ee baanka
guud ee xeerka lacagta waa wadarta daynta waa sharciga ku saabsan, kaas oo lagu qeexay sida mid ka mid ah saddex-meelood meel ka mid ah dakhliga sanadlaha ah in xadka sare.
Intaa waxaa dheer, waxay ku xiran tahay xaddiga amaahda ku jira diyaarinta, sida u baahan shahaado dakhliga.
control guud ee mugga waxaa inta badan laga codsadaa sida maaliyadda macaamiisha iyo credit cards, iyo lacag ganacsi ee mulkiilayaal kaliya, ahaan ka reeban oo la tixgelinayo amaahashada ee bangiga doonaa.
Tani waa tilmaanta macnaha xoogan oo ikhtiyaar u leeyahay in bangiyada iyo shirkadaha ayaa ka go'an, waxaa aan sinaba in lacag weyddiisto aan xad lahayn.
ee la soo dhaafay, tan waxaa loo maleeyey in aad amaahato lacag ka duwan bixinta suurto gal ah ee u gaarka ah, waxaa muhiim ah in dad kuuguma soo deynta si taxadir leh loo tixgelin doonaa.